Ny Tsikaiky Shiliana, Otrikaretina Tsy Azo Ivalozana Ho An’i Amerika Latina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Janoary 2016 14:42 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, македонски, Español
Ny “Porno ho an'ireo hipsters” dia lahatsary fampihomehezana nifampizaràna betsaka teny anivon'ny tambajotra miteny espaniola, ary mikendry ny hanao zava-mahatsikaiky avy any ambadik'ireo vondrona sosialy sasantsasany. Azo jerena ao amin'ny Youtube ny pikantsary avy amin'io lahatsary io, ao amin'ny kaonty Laf Producciones.
Eo an-dalam-pahitana ny zavatra azon'ny aterineto atolotra amin'ny resaka fanelezana ny fomba fanehoana ara-javakanto ireo tanora Latino-Amerikàna, hita amin'izany indrindra indrindra ny resaka mampihomehy, mahatsikaiky. Toy izany, ohatra, ny ataon'ny Laf Productions, orinasa iray ahitàna andianà Shiliana mahay mamorona, mandefa amin'ny anarany manokana ho ety anaty aterineto ireo tsikaiky avy aminy. Lasa tena malaza be ny Laf ety anaty tambajotra sosialy, ary hatrany ivelan'ny sisintany Shiliana mihitsy, fanalahidy iray hahalasa ny vontoaty iray hiely be. Avondron'ny Facebook, Twitter ary YouTube ireo rehetra manaraka ireny tanora mpampihomehy ireny. Ny anaran'ny marika, Laf, dia manondro indrindra ny fomba fanonona ilay teny anglisy laugh (ny hehy) fa amin'ny feo espaniola.
Nahazo ny lazany, tsy ao Shili ihany, fa hatrany Arzantina sy Meksika, ankoatra ireo firenena hafa ao Amerika Latina, ity tarika ity izay noforonina manodidina an'i Andrés Feddersen (tale ara-barotra), Loretto Araya (tale ara-javakanto sy mpandray anjara fototra ao anatin'ireo tantara mahatsikaiky tena malaza) ary Sebastián Lavados (mpanatontosa ny resaka haino aman-jery). Porofon'izany ny ao amin'ny Twitter:
Nahita tarika iray vaovao mpiangaly mozika avy any Danemark aho, izay tsy mbola fantatry ny olona… HAHAHA
Lazain'ireo tomponandraikitr'ity firohotana ity fa ity fandefasana lahatsary fohy natao manokana ho an'ny karazana fanjifàna amin'ny alàalan'ny smartphones ity, sy ny fitsinjarazaràna ny olona amin'ny alàlan'ny Facebook no fanalahidin'ny fijerena ireny tantara mahatsikaiky ireny, izay nàka endrika hifanaraka amin'ny tontolon'ny tambajotra miteny espaniola. Nandritry ny tafa iray notanterahan'ny mpampahalala vaovao tao an-toerana, BiobioChile, manazava i Andrés hoe :
Tsy anananao ny fotoana hanolorana mpilalao iray ao amin'ny aterineto. Ny mpilalao iray, ny famariparitana azy, ny tantarany, faran'izay mihisatra izany, koa satria tsy afaka ny hametraka anarana eo amboniny ianao mba hahafahan'ny olona mamantatra azy sy manakatra ny tantara, dia tsy maintsy omenao azy ireo ny fahatsapàna hoe manana zavatra holazaina manokana amin'izy ireo ianao […] Tena faran'izay kely ny fotoana anananao mba hisarihana ny sain'ny olona, ka tsy maintsy manome zavatra azy ianao, izay misy fiantraikany eo noho eo amin'ny kolontsainy. Fotoana hafa, fomba hafa koa izany no anolorana zavatra azy.
Lasa zavatra fandinika amin'ny alàlan'ny hanihany ataon'ity vondrona shiliana tia mamorona ity ireo olona tsotra mahazatra any anatin'ny kolontsaina ankehitrinin'ireo tanora. Ao anatin'ilay andian-tantara “Porno para” hipsters, lasa mivadika ho antom-pihomehezana ireo mpankafy Star Wars, mpihinana ravina, sns :
Averin'ny Laf hanàko indray ireo mpilalao izay nampiavaka ny andavanandron'ny andian-taranaka iray, ary asehony amin'ny alàlan'ny hanihany. Angamba anisan'ny iray amin'ireo tsiambaratelon'ny fahombiazana azony izany. Mahita ny tenany araka izany ireo manana salan-taona roapolo sy telopolo taona, ao anatin'ireo lahatsarin'ny Laf Producciones, mpitazana ny fiainany andavanandro no sady lokin'ny hehy mihitsy aza amin'izany. Azo resahana amin'io fomba io ihany koa ireo olana mifandraika amin'ny resaka firaisana ara-nofo.
Na atao aza hoe manondro ireo mpisehatra manerantany ny lohahevitra ao anatin'ireo lahatsary, manana ny toerany tsara ireo hanihany ao an-toerana iresahana lohahevitra voafaritra manokana momba ny maha-izy azy ny Shiliana.
Ao anatin'ny lahatsary: “7 fails típicos del 18″, dia ny ‘fahaleovantenan'i Shily no ventin'ny tsikaiky, izay heno mateika momba izany ary izay tena zavamisy marina. Tahaka izany ihany koa, ireo lahatsary sasantsasany tafiditra ao anatin'ny andiany #Cómo me ven dia milalao ny fomba fijerin-dry zareo Shiliana ao an-drenivohitra ny avy any amin'ny faritany sy ny mifamadika amin'izay.